Guqula umbala wamehlo nge Photoshop ngokukhawuleza nangokulula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Guqula umbala wamehlo nge Photoshop
Guqula umbala wamehlo nge Photoshop Ngokukhawuleza nangokulula kusivumela ukuba singqine ukuba olunye uhlobo lombala wamehlo luya kulunga kuthi ngaphandle kokuya kulo naluphi na uhlobo lotyando okanye ukusebenzisa iilensi ezikhethekileyo. Photoshop ngumjikelo omkhulu womlingo esivumela ukuba senze phantse yonke into kwiifoto zethu kwinkqubo yedijithali yokubamba kwakhona, kule meko, liziko lethu lotyando lweplastiki.
Ukwenza oku kukhawuleza kwaye kulula. Kwezinye nje ezimbalwa Imizuzu ye5 sinokutshintsha umbala wamehlo ngendlela eyiyo kunye nobungcalil, ukufunda kwangaxeshanye ukusebenzisa izixhobo ezisisiseko zokuphinda ungene kwidijithali Photoshop.
Into yokuqala esiza kuyenza ukuvula ifoto kuyo Photoshop, eyona nto ifanelekileyo kukujonga umfanekiso apho amehlo abonakala khona kakhulu ukufezekisa umphumo obonakalayo.
Los amanyathelo esiza kulandela yile ilandelayo:
Ukukhethwa kwamehlo nasiphi na isixhobo sokukhetha
Uhlengahlengiso loLuhlu ngoKhetho lweBhalansi yoMbala
Inyathelo lokuqala ngu yenza ukhetho lwamehlo Naso nasiphi na isixhobo sokhetho Ifotohop, Kule meko sisebenzise isixhobo imaski ekhawulezayo. Imaski ekhawulezayo isivumela ukuba senze ukhetho ngokungathi ibrashi. Senza ukhetho lweliso kwaye sinika i icon yemaski ekhawulezayo kwakhona ukufumana ukhetho, emva koko kwimenyu ephezulu sijonga ukhetho / ukuguqula ithebhu. Eyona nto ifanelekileyo xa usenza ukhetho ngemaski ekhawulezayo yile tshintsha ubunzima bokubambal, kwimiphetho yamehlo kungcono ukusebenzisa ubunzima obuphantsi.
Into elandelayo esiza kuyenza kukwenza ifayile ye uhlengahlengiso lolungelelwaniso ukutshintsha umbala wamehlo, sinawo ngeendlela ezahlukeneyo ukwenza oku: ibhalansi yombala, ukulungiswa kokukhetha, amagophe ... njl. Kule meko siza kusebenzisa isixhobo sokulinganisa umbala. Sidlala ngemibala kwaye sijonga ithoni enomdla kuthi.
Nje ukuba sigqibile ngale nto elandelayo esinokuyenza kukulungelelanisa opacity kwaye ugcwaliseokanye umaleko wokufumana ubunyani obukhulu.
Ukugqiba sakha i uhlengahlengiso lolungelelwaniso Ngaphezulu komaleko wokulinganisela umbala, injongo yeli nyathelo kukubuyisa kwakhona loo maleko ukufezekisa ubunyani obukhulu kwisiphumo ngokususa iinkcukacha ezincinci. Sikhetha ibrashi ngemaski esebenzayo, sidlala ngokungacacanga kunye nobulukhuni bebrashi ukufezekisa ukudibana okukhulu phakathi kombala olungisiweyo kunye neliso.
Photoshop Sesona sixhobo sinamandla sokuphinda sisebenzise kwidijithali kwintengiso, isivumela ukuba senze konke esinokucinga ngokuba kuko ukucinga umda kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Guqula umbala wamehlo nge Photoshop
Izixhobo kunye nezixhobo zokuphuhlisa infographics
Itemplate yezixhobo zasimahla, iibhanki zemifanekiso kunye nee icon